Moe Kai: နို်င်ငံ ရပ်ခြား ပြောမိသော မြန်မာ စကားများ
နောက် တခေါက်ကတော. ဆေးရုံမှာ။ ဘော.စ် (Consultant) ကို လူနာ အကြောင်း ပြောပြနေရင်း တဝက်မှာ မှားပြောမိတာ ကိုယ်.ကို သတိရတော. “အဲတော. ဟုတ်ပါဘူး” ဆိုပြီး ပြင်ပြော ဖို. ကျိုးစားခါမှ ပိုဆိုးတဲ. ဆီ ရောက်တော.တယ်။ ဘော.စ် (Consultant) ကလဲ “WHAT?” ဆိုပြီး ထအော်ရော ဟိ။
အဲဒီ လို မကြာ ခဏ “အမလေး” “အမေ.” “ဘုရား” အော်မိတာတွေကတော. အခေါက်ပေါင်း မရေ အတွက် နိုင်အောင်ပါပဲ။ညဂျူတီ တခေါက်တုန်းကလဲ တညလုံး ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ် ပြီး မနက် ၅နာရီ လောက်မှ ခဏ ဆိုပြီး အိပ်ပျော် သွားပါတယ်။ ကိုယ်ရယ် ကိုယ်.ရဲ. စီနီယာ ကုလားတယောက် က အခန်းရဲ. တခြား ထောင်.က ခုတင် တခုရယ်မှာ ပေါ.။ တချက် ဆတ်ခနဲ နိုးလာတော. အလန်.လန်. အဖြတ်ဖြတ် နာရီ ကြည်.လိုက်တော. ၈နာရီ အတိ။ ဘော.စ် Consultant လာပြီး ward round လုပ်မယ်.အချိန် ရောက်နေပြီ။ ဒါနဲ. ခမန်း ခတန်း စီနီယာ ကုလား ဆရာဝန်လေး ကို “ထထ မြန်မြန် ထတော. Consultant လာတော.မယ်။ ငါတို. နောက်တောင် ကျနေပြီ” လို. ထအော်ပါရော။ အဲဒါနဲ. အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေတဲ. ဆရာဝန် လေးကလဲ တကယ်.ကို အူကြောင်ကြောင် ဖြစ် နေပုံနဲ. “Emm, what?” ဆိုမှပဲ .. "hee heee sorry" ပါပေါ.။အဲဒီလိုပဲ ဆေးရုံမှာ ဟိုးတလော က ဒီလိုပဲ ဖြတ်သွားတုန်း တွေ.လိုက်ရတာ။ စစ္စတာကြီး တယောက် ပွစိပွစိ ပြောနေတာကို ရှေ.က ဆရာဝန် ကတော. ပထမတော. ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး Ok Ok ပေါ.။ နောက် မှ အသာလေး ဟိုဖက်ကို လှဲ. ပြီးတော. သူတယောက်ထဲ ရေရွတ် နေတာကို ကြားမိလိုက်တာကတော. “ ဒီမိန်းမတော. ကွာ ငါ လုပ်ထဲ. လိုက်ရ မကောင်း ရှိချေရော.မယ် ” ဆိုပဲ ..ဒါကြောင်. တိုင်တပါးမှာ နေပေမယ်. မြန်မာ လိုပြောကြတဲ. အခါမှာ သတိတော. ထားရပါတယ်။ မကြာသေးတုန်းကမှ စိုက်ပရပ်စ် (Cyprus) ကို အလယ် သွားတုန်း အမျိုးသားနဲ. မြန်မာလိုတွေ အားရပါးရ ပြောနေတုန်း စားပွဲထိုးလေး တယောက် က လာနှုတ်ဆက်တာ ခံရ ဖူးပါတယ်။ “မြန်မာ က လာလည် နေတာလား။ ဘယ်တုန်းက ရောက်လဲတဲ.” တခြား ရီခဲ.ရတဲ. အဖြစ် ကလေးတခုကတော. သူငယ်ချင်းတယောက် စူရှီ (Sushi) ဆိုင်မှာ သွားစားတုန်း စောင်.ရတာ သိပ်ကြာတော. စိတ်မရှည်ဖြစ်လာရောတဲ.။ ဒါနဲ. သူတို.ရဲ. အော်ဒါလာယူတဲ. ကုလားမလေးကို “ဒီမိန်းမတော.ကွာ နှေးကွေးလိုက်တာ ဖင်ကို တချက်လောက် ဆောင်.ကန် လုိုက်ရ” လို. ပြောလိုက်သတဲ.။ ဒီတော. ကုလားမလေးက သူ.ဖက်ပြန် လှဲ.လာပြီး “ကန်လုိုက်ပါ အကိုရယ် ကန်လိုက်ပါ” လို. ပြောလိုက်တော.မှ ငိုးအားထပ် ရီအားသန်ရ ပါသတဲ.။